Wafdi ka socda QM oo gaaray Galgaduud
Masuuliyiin ka tirsan Qaramada Midoobay ayaa waxa ay gaareen magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyay.
Wafdigaani ka socda Qaramada Midoobay oo uu hogaaminayo Mark Bowden oo ah u qaabilsanaha QM ee dhanka biniaadanimada Soomaaliya ayaa waxa ay gaareen maanta magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud.
Ujeedka Wafdiga ay u tageen magaalada ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay iyaga oo doonaya inay indho indheeyaan xaalada biniaadanimo ee ka jirta deegaanada ay maamusho Ahlu Sunna ee gobolada dhexe.
Mark Bowden ayaa waxaa la filayaa in uu kulamo la qaato Saraakiisha Ahlu Sunna Waljamaaca ee gobolka dhexe kuwaasi oo uu kala hadli doono arrimo la xiriira xaaladda dadka taagta daran ee ku nool deegaano ay ka mid yihiin kuwa hoostaga gobolka Galgaduud.
Ahlu Sunna Waljamaaca ayaa waxa ay dhowr jeer oo hore ay Qaramada Midoobay ugu baaqday inay gargaar soo gaarsiiso dadka ku dhibaateysan deegaanada ay maamusho ee bartamaha dalka Soomaaliya kuwaasi oo xaaladooda laga deyriyay.